Tenga Universal 30000mAh Solar Power Bank Ine 2 USB Ports | WoopShop®
Universal 30000mAh Solar Power Bank Ine 2 USB Ports
dema / 30000mAhbhuruu / 30000mAhgoridhe / 30000mAhsirivheri / 30000mAh
Universal 30000mAh Solar Power Bank Ine 2 USB Ports - dema / 30000mAh yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Zvimiro: neSolar Panel, Digital Display
Chinobuda Chinobuda: Double USB
Nyaya: Alloy Material
Zvimiro: jira remhando yepamusoro kwazvo, simba rezuva, nharaunda-inoshamwaridzika Inotakurika, iri nyore kushandisa, uye yakasimba kuti ishandiswe pakufamba.
2 USB ports inogona kubatana nemidziyo miviri panguva imwe chete.
Iyo LCD icharatidza mamiriro ekuchaja eyuniti zvakajeka kana ichichajwa.
Kurerukira kutakura, kunogona kushandisa simba rezuva kuchaja foni yako chero kupi uye chero nguva Yedu yemagetsi paki yaigona kuona voltage inoenderana nemudziyo wako otomatiki uye kutanga kuchengetedza kuchengetedza kudzivirira kuwandisa, kupisa, uye pfupi-circuit.
Inoenderana Model: General
Kuburitsa 1: DC 5V1A
Kuburitsa 2: DC 5V2.1A
Package Inosanganisirwa: 1 x solar power bank, 1 x bhuku, 1 x USB Cable, 1 x bhokisi